Ugogbe egwuregwu maka ịgba ọsọ, ịgba ígwè na ski - ULLER
Dị ka usoro a na-ekwu okwu
nkwụsịtụ slide Egwuregwu slide
Mbelata 25% na koodu ọ bụla 🤘: ULLER25
Buscar Akaụntụ 0 Carrito
Anya anya n'ihu
Ndị na-ahụ maka FLASH
A na-agbakwunye koodu mbelata, ụgwọ mbupu na ụtụ isi n'oge ndenye ọpụpụ.
Su carrito realmente está akpa.
MAKA SKI Gbasaa menu
25% mbelata na ihe niile 🤘
Iji koodu: ULLER25 mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka ịzụrụ gị
Ndị na-ere ahịa kachasị mma
Ederede mkpụrụ edemede, AZ
Ederede mkpụrụ edemede, ZA
Ọnụahịa, dị ala ruo elu
Ọnụahịa, dị elu ruo ala
:Bọchị: ochie ruo n’oge na-adịbeghị anya
:Bọchị: ọhụụ na nke ochie
Iwu IwuAtụmatụNdị na-ere ahịa kachasị mmaEderede mkpụrụ edemede, AZEderede mkpụrụ edemede, ZAỌnụahịa, dị ala ruo eluỌnụahịa, dị elu ruo ala:Bọchị: ochie ruo n’oge na-adịbeghị anya:Bọchị: ọhụụ na nke ochie
Kpọchie Blue / Green
Bolt Red / ojii
Bolt Red / acha anụnụ anụnụ
Nye ọnụahịa9900 € 99.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 86
Bolt Red / enyo
Kpọchie White / Purple
Bolt edo edo / ojii
Nye ọnụahịa8999 € 89.99 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 95.01
Bolt edo edo / odo
Clarion Nwa / Black
Clarion Nwa / Blue
Nye ọnụahịa11000 € 110.00 € Ụdị oge 14000 € 140.00 € Ị na-echekwa € 30
Clarion White / Uhie
Clarion Agba odo / Blue
Nye ọnụahịa9900 € 99.00 € Ụdị oge 14000 € 140.00 € Ị na-echekwa € 41
Gbè Egwuregwu ojii / Green
Nye ọnụahịa9900 € 99.00 € Ụdị oge 16000 € 160.00 € Ị na-echekwa € 61
Gbè Eluigwe Black / Red
Gbè eluigwe Blue / Enyo
Nye ọnụahịa7900 € 79.00 € Ụdị oge 16000 € 160.00 € Ị na-echekwa € 81
Undergbè eluigwe Grey / Green
Undergbè Eluigwe White / Blue
Ugwu Vol / Blue
Volcano Nwa / Enyo
Blue / Black ojii mgbawa
Nye ọnụahịa7900 € 79.00 € Ụdị oge 12000 € 120.00 € Ị na-echekwa € 41
Ugwu Uhie / Blue
Volcano White / Enyo
Nye ọnụahịa9900 € 99.00 € Ụdị oge 12000 € 120.00 € Ị na-echekwa € 21
SPORT SUNGLASSES IHE Mbanụ na Nwanyị
Uller® Ọ bụ akara ngosi dị elu dị elu nke ndị egwuregwu a ma ama mepụtara. A na-emepụta ngwaahịa anyị niile n'okpuru ahụmịhe nke ndị na-eme egwuregwu dị elu bụ ndị na-enweghị mkpa ha na ngwaahịa anyị ma kee ha iji kpuchie ihe niile achọrọ. A na-anwale ngwaahịa ndị ahụ na-akpọga ha na nrụgide kachasị dị elu iji hụ na ha ga-emezu atụmanya n'oge eji na egwuregwu na ọkachamara egwuregwu.
SITE ATHLETES, IHE ATTHLETES
Uller® bụ akara Spanish nke ngwa ngwa egwuregwu na ejiji ngwa anya tọrọ ntọala na 2006, nke nwere ahụmịhe karịa afọ 15 na-enye ngwaahịa ndị dị oke mma na mpaghara a. Ugbu a, ika anyị ji mpako ịbụ akụkụ nke Indicom Brands, ụlọ ọrụ na-achịkọta ọtụtụ ụdị nke ya, gụnyere. Uller®, kacha oru oru nke otu.
Dị ka ụlọ ọrụ, anyị bụ ọkachamara na imepụta, mmepụta na nkesa nke ugogbe anya anwụ egwuregwu na egwuregwu-ihe eji egwu egwuregwu maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere arụmọrụ kachasị elu, nke emere maka ọrụ ọkachamara ma ọ bụ ọkara ọkachamara nke usoro ọzụzụ egwuregwu dị iche iche, nke a na-eme na gburugburu. mepere emepe, dịka ọmụmaatụ ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè, yana egwuregwu egwuregwu, dịka ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, MTB, ịgba ọsọ n'okporo ụzọ, ikuku ikuku na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme n'èzí. Maka nke a, na www.ullerco.com ị ga-ahụ ụdị nchịkọta anya egwuregwu dị iche iche nke kachasị mma, nke ndị na-eme egwuregwu mere maka ndị na-eme egwuregwu.
Buru n'uche na nkọwapụta teknụzụ niile nke ugogbe anya maka egwuregwu anyị dị na nkọwapụta nke ụdị ọ bụla akọwapụtara. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịgwa gị na nchịkọta anyị niile nke iko egwuregwu bụ nke adịchaghị, yana anyị nwere ọtụtụ ụdị nwere agba dị iche iche yana aghụghọ, gụnyere iko maka ụzọ, ụzọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ugwu, iko mmiri na-agba ọsọ na kwa iko maka ịgba ọsọ. dabere na nnweta nchịkọta ọ bụla na ngwaahịa anyị.
Kedu ka ụdị iko iko anyị si dị?
Anyị maara mkpa ọ dị iyi ugogbe anya anwụ mgbe anwụ na -acha anyị. Maka nke a, iko nke egwuregwu anyị bụ ihe na -eguzogide nke kachasị mma, nke na -enye nchebe na nkasi obi kachasị n'oge egwuregwu. N'otu aka ahụ, anya m nwere teknụzụ X-Polar nwere nkọwa UV-400 dị elu. Ya mere, mkpokọta ugogbe anya anwụ egwuregwu anyị nwere maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na -enye ngwa anya na -enweghị atụ n'ofe ọkụ niile. Igwe enyo ndị a na -agba ịnyịnya ma ọ bụ iko na -agba agba, dị ka ọ nwere ike, meziwanye echiche gị banyere ọdịiche na agba. N'ụzọ dị otu a, iko egwuregwu anyị niile, gụnyere mkpokọta ndenye ọgwụ na iko ịgba ịnyịnya na-abụghị ọgwụ, nwere teknụzụ kachasị mma na oghere ha yana oke nchekwa UV-400.
Fọdụ n'ime mkpokọta iko iko anyị gụnyere ụdị a na-agbanwe agbanwe, nke edoziri iji gboo mkpa nke ndị egwuregwu nwere ụfọdụ anya anya, ma chọọ iko mmezi iji na-eme egwuregwu. Dị ndị a nke iko iko eji egwu egwu nwere oghere ma ọ bụ obere mkpirisi na etiti ha ka ha tinye oghere na-agbazi, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ n ’zụrụ nke ọ bụla n’ime ụdị ụdị iko a na - etinye n’egwuregwu anyị dị n’ụlọ ahịa anyị dị na ntanetị, ị ga - ewega ha na onye na - ahụ maka anya mmiri ka o nwee ike idozi anya m dị ka ọnọdụ anya gị siri dị. A ga-etinyerịrị anya m ndị a na mpempe akwụkwọ dị na okpokoro nke ugogbe egwuregwu ọgwụ gị. Igwe egwuregwu a na-agbanwe agbanwe nke ị hụrụ na weebụsaịtị anyị, dịka ọmụmaatụ, ụdị anyị nke iko eji agba ịnyịnya ígwè, dabere na nnweta ngwaahịa anyị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta ụdị nwere njirimara ndị a, ị kwesịrị ijide n'aka site na ịlele nkọwa nke ụdị ọ bụla nke iko egwuregwu ọkachasị.
Kedu ihe iko iko anyị nwere?
Sportsdị ugogbe anya maka anwụ anyị gụnyere:
Okpokoro ejiri ihe ndi kachasi ike na ihe di mfe site na nkwekorita unisex, ya mere o na eji edozi nwoke na nwanyi. Agbanyeghị, anyị nwere ụdị iko iko egwuregwu maka ụmụ nwoke yana ụdị iko eji egwu ụmụ nwanyị.
Iko nwere teknụzụ X-POLAR dị elu yana nchedo UV-400 CAT. 3.
Modelsdị anyị nke iko egwuregwu na iko a na-agbanwe agbanwe na-agụnye oghere nke abụọ CAT1, maka ụbọchị ọkụ dị ala.
Ihe mkpuchi microfiber.
Ntuziaka na akwụkwọ ikike akwụkwọ ikike.
Mkpokọta e mere maka egwuregwu
Chọpụta ụdị iko anyị maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè.
Anyị emeela ọtụtụ ụdị iko eji eme egwuregwu pụrụ iche gafere ma gafee atụmanya nke ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na ndị amateur cyclist. Ya mere, ọtụtụ nchịkọta anyị gụnyere ụdị ọgwụ eji ede ọgwụ na nke na-abụghị ọgwụ na-agba ịnyịnya, na ụdị nke ụzọ, ụzọ ma ọ bụ iko igwe eji agba ugwu, maka nkasi obi nke ndị niile hụrụ ịnyịnya ígwè n'anya, ọbụlagodi ndị chọrọ ịgbanwe ha dịka ọnọdụ ophthalmological ha si dị.
Premiumdị iko ndị na-agba ịnyịnya igwe adịchaghị dị na webụsaịtị anyị nwere arụmọrụ kacha elu na ahịa. A na-eji ihe ndị na-eguzogide ọgwụ na lenses dị elu akọwapụta ihe, nke na-enye nkasi obi na nchebe nye onye na-eme egwuregwu n'oge ịgba ígwè. N'ezie, ọtụtụ ugogbe anya anyị na-agba ịnyịnya ígwè na-agụnye oghere nke abụọ akpọrọ maka ụbọchị ọkụ anaghị acha. Na mgbakwunye, nchịkọta anyị nke ugogbe anya ịnyịnya ígwè, maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, dị nha, agba na aghụghọ dị iche iche. Onye ọ bụla n’ime ha nwere nchedo UV-400 ma na-enyere aka melite ọdịiche dị iche na agba n’oge ịgba ígwè n’ime ime obodo na oghere. Kpọmkwem, ụdị anyị nke iko iko ịnyịnya n'okporo ụzọ dị mma maka ụdị ala abụọ. Egosiputara ihe nlere a maka omume nke ugwu na uzo ozo, ma obu kwa maka njem nlegharị anya.
Chọpụta ụdị iko anyị maka ndị na-agba ọsọ.
Anyị na -enye ugogbe anya anwụ egwuregwu kacha mma maka ịgba ọsọ n'ahịa, dịka ndị mmekọ azụmahịa anyị, ndị ahịa na ndị nnọchi anya egwuregwu kwuru. Ndị ọkachamara n'egwuregwu nwalere nke ọ bụla n'ime ụdị iko anyị na -agba ọsọ, nke nzaghachi ha na -enyere anyị aka ime nkwalite dị mkpa iji nye iko na -agba ọsọ nke kacha mma, yana atụmatụ na -enyere ndị na -agba ọsọ aka ime nke ọma.
Modelsdị nke iko a na-agba ọsọ na-eji ụdị egwuregwu niile, ọbụlagodi ndị na-ejeghị aka na egwuregwu a, mana ndị nwere obi ụtọ na-agba ọsọ na obodo mepere emepe ma ọ bụ n'èzí. Agbanyeghị, etinyere ụdị anyị niile nke iko eji agba ọsọ maka ndị ọkachamara ama ama na ndị ọkaibe na-agba ọsọ, na ebumnuche nke nzukọ na gafere mkpa ha kachasị mkpa n'oge egwuregwu.
Anyị ugogbe anya maka anwụ maka ndị na-agba ọsọ ụkwụ. Dị ka ha dị?
Na mgbakwunye na nchịkọta ndị ahụ anyị kwuru na mbụ, anyị etinyewokwa ụdị na mpempe akwụkwọ anyị nke iko egwuregwu, nke emebere maka agbụrụ ọsọ ọsọ na agbụrụ dị anya. Kpọmkwem, ụzọ anyị na-agba ugogbe anya maka anwụ na-enye nchedo, nkwụsi ike na ịdị nro nke na-echebe ndị na-agba ọsọ ụkwụ mgbe ha na-agabiga ihe ịma aka na enweghị ugwu, na-elekọta ma melite ọhụụ ha.
N'ụzọ dị otú a, ugogbe anya maka anwụ na-agba ọsọ na-adabara ọkachasị maka marathons na ọkara, ogologo na ogologo ogologo agbụrụ. Ọbụna anyị etinyere ụdị ugogbe anya maka anwụ maka enyo ụzọ na-agba ọsọ nke anya m nwere ike ịgbanwe na-enye ndị na-agba ọsọ ụkwụ ohere iji ụdị kachasị dịrị ha mma dịka ihu igwe na ọnọdụ ọkụ.
Cheta na ngwaahịa anyị niile dabere na nnweta ngwaahịa anyị. Na mgbakwunye, njirimara niile akọwapụtara nke iko egwuregwu anyị, gụnyere ụdị enyo anyị maka ịgba ski, ịgba ọsọ, ịgba ọsọ na ụdị nke iko ịnyịnya igwe n'okporo ụzọ anyị nwere ike ịhụ na nkọwa nke ha. N'ụzọ dị otu a, anyị na -arịọ ndị ahịa anyị niile ka ha gụọ nkọwa nke ngwaahịa ọ bụla akọwapụtara nke ọma ka ha wee nwee ike họrọ ugogbe anya ọhụrụ egwuregwu ọhụrụ ha.
elere nso nso a
ULLER ỤWA - BLOG
Hụ ha niile
Kedu ihe bụ FREERIDE? Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ụdị egwuregwu ski kacha egwu
Jenụwarị 18, 2022
Ị nwalarị ịgba ọsọ abalị?
SKI na ihe owuwu
Ọgbọ ọdụ ụgbọ mmiri kacha mma n'ụwa ga-aga snoo
Disemba 28, 2021
Ihe 10 ga-eju gị anya gbasara CANDIDE THOVEX
Disemba 27, 2021
Soro anyị na netwọkụ mmekọrịta
CNY Â ¥
Ọ bụ onye ọ bụla
Ọnụ ego nke MVR MVR
Ọnụ ego XCD
© 2022 ULLER Ikike niile echekwabara